कोरोना संक्रमणको भन्दा समाजको डर - नेपालबहस
कोरोना संक्रमणको भन्दा समाजको डर
| १४:०७:१८ मा प्रकाशित
२३ भदौ, चितवन । कोरोना भाइरस सङ्क्रमित र उनीहरुको परिवारलाई हेयको दृष्टिकोणले हेर्नु हुदैन भन्ने समाचार दिनहुँ आइरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा पनि यस्ता कार्यहरुको व्यापक आलोचना हुने गरेको छ । तर पनि मानिसको व्यवहारमा सुधार आउन सकेको छैन । कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण समुदायसम्म नै पुगेको छ तर सङ्क्रमित र उनीहरुको परिवारलाई माया र आवश्यक सहयोग गरौँ भन्ने सकारात्मक सन्देशले भने समुदायमा प्रवेश पाउन सकेको छैन ।
पत्रकार वसन्त ढुङ्गानाका दाजुलाई सङ्क्रण देखिएपछि उनी २४ दिनसम्म दाजुसँगै घरमै बसे। उहाँहरुको घर भरतपुर महानगरपालिका वडा नं. ८ लालिगुराँस चोकमा छ । उनीहरुको यो २४ दिनको समय पूरै तनावमा बित्यो । दाजुलाई सङ्क्रमण भयो, भाउजू छोराछोरी र उनलाई सङ्क्रमण भएन ।
दाजुको सङ्क्रमणको अवधिभर परिवार पूरै मानसिक तनावमा रहनु प¥यो । उनले दुखेसो पोखे, “दाजुलाई लक्षण नदेखिएकाले रोगका कारणले नभएर समाजका कारणले हामीलाई तनाव सिर्जना भयो ।” उनका अनुसार घरमा बाहिरबाट तयारी खाना कसैले ल्याइदिँदै गर्दा स्थानीयले प्रहरीलाई खबर गथ्र्यो । केही छिनमा प्रहरी आइपुग्थे । उनले भने, “मानौँ कि हाम्रो घर कुनै अपराधीको घरजस्तो भयो ।” उनले अगाडी गपे, “कहिलेकाहीँ त यस्तो ठाउँमा किन घर बनाइएछ भने जस्तो पनि भयो, निकै पछुतो लाग्यो ।”
स्थानीयले जानेर नभएर नबुझेर त्यसो गरेको भन्ने सोचेर आफूहरुले चित्त बुझाउने गरेको उनले बताए । गएको साउन २६ गते सङ्क्रमण देखिएपछि दाजुलाई सङ्क्रमणमुक्त हुन लामो समय लागेको ढुङ्गानाले जानकारी दिए । जिल्ला अदालत चितवन बार एशोसिएशनका अध्यक्ष कमल पाठककी १०९ वर्षीया मावली हजुरआमाको कोरोना सङ्क्रमणका कारण मृत्यु भयो ।
उनको स्याहारमा जुटेका पाँच जना सानीआमा, एक नातिनी र एक नातिनी ज्वाइँमा पनि सङ्क्रमण देखियो । पाठकको एकजना सानीआमा अहिले पनि भरतपुर अस्पतालका सघन उपचार कक्षमा उपचाररत छन् ।
खैरहनी नगरपालिका वडा नं ३ का स्थायी वासिन्दा पाठकको भनाइअनुसार त्यसपछि त्यहाँ जोडिएका ६१ सदस्य १८ दिनसम्म क्वारेन्टिनमा बस्नुप¥यो । परिवारले भोगेको पीडा यहाँ भनेर व्याख्या गर्न नसकिने उनको अनुभव छ । पाठकले भने, “क्वारेन्टिनको अवधि पार गरेर पिसिआर नेटेटिभ आउँदा पनि अहिले पनि समाजमा घुलमिल हुन नदिएको उनको गुनासो छ । उनले गुनासो गरे, “म नजिक गएँ भने कतिपय बसिरहेका मानिस उठेर हिँड्छन् ।”
सानीआमालाई अस्पतालमा भएको गाह्रो आफैँमा पीडादायी भएको उनी बताउँछन् । सघन उपचार कक्ष बाहिरबाट बिरामी हेर्दै गर्दा मन भक्कानिने गरेको उनको गुनासो छ । अक्सिजन फाल्ने, शैयाबाट भुईंमा झर्ने जस्ता समस्या हुने गरेको भए पनि डर र त्रासका कारण त्यस्ता बिरामीले उपचार राम्रोसँग पाउन नसकेको उनले बताए ।
सङ्क्रमितमध्येकै अन्य बिरामीले सक्नेले नसक्नेलाई सेवा गरिरहेको उनी बताउँछन् । पाठकले भने, “आफन्त गुमाउँदाको पीडा, बिरामीको पीडा त छँदैछ, समाजले दिने पीडा झन् ठूलो बनेको छ ।” उनले सुरक्षा मापदण्ड र भौतिक दूरी कायम गर्दै उनीहरुलाई दुःखमा सहानुभूति दिन आउनेहरुलाई समेत समाजले नराम्रो नजरले हेर्ने गरेको देख्दा झनै नरमाइलो लाग्ने गरेको सुनाए ।
भरतपुर महानगरपालिका वडा नं. २ निवासी अमिर रामदामको एकाघरमा बस्ने काकाको कोरोना सङ्क्रमणबाट निधन भएको छ । सँगै बसेका ७४ वर्षीय हजुरबुबा सङ्क्रमित छन् । उनले गुनासो गर्दै भने, “हामीले यतिबेला एक्लो महसुस गरेका छौँ ।” कतिपय साथीभाइले टेलिफोन गर्दा समेत कोरोना सर्ला जस्तो गरेको उनको भनाइ छ । सीमित सम्पर्कमा आएकाहरुबाट रासन पानी मगाएर गुजारा चलाउने गरेको रामदामको दुखेसो छ ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घ चितवनका सदस्यसमेत रहनुभएका रामदामले समाजलाई बुझाउन नसक्दाका कारण समस्या आउने गरेको बताए । उनले भने, “समाजले अझै पनि रोग कसरी सर्छ भन्ने राम्रोसँग बुझेको छैन ।”
कोरोनालाई जितेर काम थाल्नुभएका भरतपुर अस्पतालका प्रसूति रोग विशेषज्ञ डा सुनिलमणि पोखरेल सङ्क्रमण देखिँदै गर्दा परिवारलाई निकै पीडा भएको आफूले भोगेको बताउँछन् । रोगका बारेमा बुझिनसकेकै कारण समाजमा धेरै त्रास रहेको उनको भनाई छ । शुरुका दिनहरुमा एचआइभी एड्स सङ्क्रमितलाई जुन रुपमा हे¥यो, अहिले त्यही ढङ्गबाट कोरोना सङ्क्रमितलाई हेर्ने गरेको उनको बुझाई छ । मनोबललाई उच्च राख्न सकेमा रोगलाई परास्त गर्न सकिने बताउँदै उनले भने, “समाजलाई बुझाउन सकेमा समाजबाट हुने पीडा कम गर्न सकिन्छ ।”
भरतपुर अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट डा श्रीराम तिवारीको सङ्क्रमणपछि उनीसँगै काम गरेका अस्पतालका चिकित्सक तथा कर्मचारी, बैठकमा सहभागी जिल्लाका जनप्रतिनिधि, उच्च पदस्थ व्यक्ति, परिवारमा समेत सङ्क्रमणको आशङ्का भयो । परिवारसँग छुट्टिएर काठमाडौँबाट चितवन आएसँगै उहाँमा सङ्क्रमण देखिएको थियो । उनकी श्रीमती शीला तिवारी शुरुका दिनमा निकै पीडा महसुस भएको बताउँछन् । तिवारीमा लक्षणसमेत देखिएकाले केही भइहाल्छ कि भन्ने आफूमा चिन्ता भएको उनको अनुभव छ ।
विश्वभरको तथ्याङ्कलाई हेर्दा ४० देखि ६० वर्षका बढी प्रभावित भएको, विश्वभरका मानिस डराएका, ठाउँठाउँमा लकडाउन र निषेधाज्ञा गरिएको, सामाजिक सञ्जाल र समाचारहरुमा कोरोनाकै बारेमा आइरहँदा र आफ्नै घरको मुख्य मानिसलाई सङ्क्रमण देखिँदा पीडा महसुस भएको उनको अनुभव सुनाए ।
आफू पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने भएको र क्रमशः लक्षण हराउँदै जाँदा पीडा पनि कम हुँदै गएको उनले बताए । डा तिवारीका श्रीमती र छोराछोरी काठमाडौँ हुनुहुन्छ भने बुबाआमा चितवनकै घरमा छन् । तर परिवारका कसैलाई पनि सर्न पाएन । उनले भने, “सङ्क्रमण भएकाले आत्मबल बलियो बनाउने र समाज र परिवारले प्रोत्साहन दिन सकेमा कोरोनालाई परास्त गर्न सहयोग पुग्छ ।”
कोरोना सङ्क्रमित भएर आइसोलेसनमा रहनुभएका पत्रकार रमेश बस्ताकोटीकी श्रीमती सिर्जना कण्डेलले कोरोना सङ्क्रमित र उनीहरुका परिवारलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन हुन नसक्दा यसले सङ्क्रमितको मनोबल झन् घट्दै गएको बताए । उनले भने, “समाजमा अझै चेतनाको स्तर विकास हुन सकेको छैन, कोरोना सङ्क्रमितको परिवारलाई हेय भावले हेर्ने र उनीहरुलाई समाजमा नै एक किसीमले बहिष्कार नै गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । यो सबैभन्दा खतरानक हो ।”
आफ्नो श्रीमान् कर्तव्यपालना र कामकै सिलसिलामा सङ्क्रमित भएको भन्दै उनले समाजले गर्ने व्यवहारबाट जोसुकै सङ्क्रमितका परिवार पनि हतास भएको बताए । “सङ्क्रमितको परिवारसँग बोल्दैमा, उनीहरुको घरको बाटो हिँड्दैमा कोरोना सर्ला भन्ने मनोबिज्ञानबाट मानिसहरु ग्रसित छन् ।” मानिसको यस्ता त्रास हटाउन जरुरी रहेको उनले बताए ।
उनले श्रीमान् सङ्क्रमित भएपछि आफू र छोरी पनि सात दिनसम्म घरभित्रै बसेको स्मरण गर्दै समाजका प्रबुद्ध भनिएका व्यक्तिहरु समेत यस विषयमा जानकार नभएजस्तो व्यवहार गर्दा आफू अचम्मित भएको गुनासो गरे ।
कण्डेलले समाजले सङ्क्रमित र उनीहरुका परिवारलाई हौसला मात्र दिने हो भने पनि आधा रोग त्यसै निको हुने बताए । उनके सुझाव छ, “एकापसमा सद्भाव कायम गर्नुपर्छ, एकले अर्कोलाई सहयोग गर्नुपर्छ अनि मात्र कोरोनासँगको लडाई जितिन्छ ।”
भरतपुर महानगरपालिका वडा नं २ क्षेत्रपुरका वसन्त पराजुलीको अनुभव भने फरक छ । उनले समाजबाट सकारात्मक सहयोग पाएको प्रतिक्रिया दिए । उनको घरको भूई तलामा भाडामा रहेका तीन जनामा सङ्क्रमण देखिएपछि पराजुली परिवार पनि घरमै सुरक्षित बसिरहेको छ । पिसिआर रिपोर्ट नआउँदासम्म आवश्यक सामग्री छरछिमेकीले घरको गेटसम्म ल्याइदिएर सहयोग पु¥याएको उनको अनुभव छ ।
स्वास्थ्य कार्यालय चितवनका प्रमुख दीपकबाबु तिवारी सावधानी सबैले अपनाउनु पर्ने तर त्रसित् हुन नपर्ने बताउँछन् । तिवारीका अनुसार सङ्क्रमितले ह्याछ्यु गर्दा, खोक्दा निस्कने छिटाबाट रोग सर्ने हुँदा दुई मिटरको दूरी कायम गरेर मास्क लगाएर, समय समयमा साबुन पानीले हात धोएमा रोग सर्नबाट बच्न सकिन्छ । सामान्य लक्षण र लक्षण नभएका घरमै सुरक्षित तरिकाले राख्न सकिने भएकाले टोल, समुदाय आत्तिनु नपर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले भने, “सङ्क्रमितलाई प्रोत्साहन दिऔँ, हतोत्साहित नबनाऔँ ।” टाढाबाट र हावाबाट रोग नसर्ने भएकाले त्रसित हुन नपर्ने उनले जानकारी दिए । घरमै रहेका सङ्क्रमितलाई समय समयमा ध्यान दिने, कपडा र प्रयोग भएका वस्तुहरु सर्फ पानी, क्लोरिनले सफा गर्ने गरेमा रोग अरुलाई सर्नबाट बचाउन सकिने उनको भनाई छ ।
घरमा बसेका सङ्क्रमित छिटो निको हुने गरेको तथ्याङ्क पनि उहाँमा छ । उनले भने । “सङ्क्रमिलाई अपमानित गर्नु हुँदैन ।” सङ्क्रमितको मृत शरीरबाट अरुमा सङ्क्रमण सर्ने सम्भावना ज्यादै न्यून हुने उनले बताए । उनले भने, “मृतक व्यक्ति र तिनका परिवारलाई हेयको दृष्टिकोणले हेर्नु हुँदैन ।”
शव व्यवस्थापन गर्न परिवारले चाहेमा उच्च सावधानी अपनाएर गर्न सकिने उनको राय छ । उनले, “अहिले ठाउँठाउँमा क्रिया बसेकाहरुलाई फरक व्यवहार गरेको सुनिएको छ, त्यो राम्रो होइन ।” मलामी गएकाहरुमा शवबाट नभएर मलामी मलामीबीचको सम्पर्कबाट रोग सर्ने गरेको उनले बताए । उनले भने, “मलामीमध्ये एउटा सङ्क्रमित हुँदा अरुलाई सर्ने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा सावधानी अपनाउनु पर्छ ।”
कोरोना सङ्क्रमित र सङ्क्रमितको परिवारलाई सुरक्षा सावधानी अपनाउँदै आवश्यक सहयोग र प्रोत्साहन गर्नेतर्फ सबै लाग्न आवश्यक छ । हालसम्म चितवनमा कोरोना भाइरसबाट १ हजार ५२ जना सङ्क्रमित भएका छन् ।
तीमध्ये २५३ जना निको भएर घर फर्र्किएका छन् भने ७८७ जना उपचाररत या आइसोलेसनमा छन् । यस जिल्लामा मात्र १२ जना सङ्क्रमितको मृत्यु भइसकेको छ । तर विभिन्न जिल्लाबाट उपचार गराउन आएकासमेत गरी हालसम्म चितवनमा २२ जना सङ्क्रमितको मृत्यु भएको छ । राससबाट
सुदूरपश्चिममा पहिलो पटक ल्याप्रोस्कोपिक विधिबाट पाठेघरको शल्यक्रिया २ मिनेट पहिले
अबको एक महिनाभित्र युरिया मल आउने ६ मिनेट पहिले
प्राथमिक विद्यालयका शिक्षकहरु टोल टोलमा पढाउँदै ९ मिनेट पहिले
बाढी पीडितको राहत रकममा जनप्रतिनिधिले गरे हिनामिना १७ मिनेट पहिले
बजारलाई प्रतिरोध क्षेत्र तोड्न हम्मे हम्मे ! प्रतिरोध क्षेत्र तोड्न नसक्नुको कारण ? ३० मिनेट पहिले
महालक्ष्मी विकास बैंकका ऋणीहरुलाई ब्याज रकममा १०% छुट ३७ मिनेट पहिले
मृतकका परिवारलाई दुई लाख सहयोग ४७ मिनेट पहिले
देउवाको रोजाईमा अधिवक्ता श्रेष्ठ बने जनसम्पर्क विभागको केन्द्रीय सदस्य ४८ मिनेट पहिले
काठमाडौं उपत्यकामा थप ६४७ जनामा कोरोना पुष्टि ५४ मिनेट पहिले
कोभिड सम्बन्धि अनुसन्धानको लागि ज्योतिद्वारा तिलगंगा अस्पताललाई सहयोग ५६ मिनेट पहिले